Tonga tany amin'ny tanàna mazika i China Tianjin Junya ary nanao ny laharam-pahamehana tao amin'ny mpamokatra sy mpamatsy fampiratiana China Foundry Die Casting Exhibition | Junya
Tamin'ny 26 Mey 2018, natolotry ny Association Machines Foundry China, ny fampirantiana China Foundry Die Casting mandritra ny telo andro dia nosokafana tamim-pahibemaso tao amin'ny Center International Convention and Exhibition Center.
Amin'ity fampirantiana ity dia fampirantiana mihoatra ny 400 avy any Chine, Etazonia, Canada, France, United Kingdom, Alemana, Switzerland, Belzika ary faritra hafa eto amin'izao tontolo izao, izay misy firenena sy faritra mihoatra ny 30 manerana izao tontolo izao. Mihoatra ny 13000 metatra toradroa ny velaran'ny velarana fampirantiana, avo dia avo. Mpampiratiana maherin'ny 60 no nandray anjara voalohany tamin'ny foara.
Tamin'ny andro nanokafana ny lanonam-panokafana dia nitsidika ny trano heva Tianjin Junya i Han Zheng, mpikambana ao amin'ny Birao maharitra ao amin'ny Birao Politikan'ny Komity foibe CPC, ny praiminisitra lefitra ao amin'ny filankevi-panjakana ary Cai Qi avy amin'ny Fikambanan'ny mpanorina milina China. , Wang Jianchao, tale jeneralin'ny Tianjin Junya Precision Machinary Co., Ltd., ary Liu Dayong, mpitantana lefitra jeneraly Ny mpitarika mpitsidika dia nampahafantatra ny toe-javatra nisy an'i Junya sy ny fivoaran'ny tetikasa.
Ny fanamafisan'ny praiminisitra Han Zheng ny vokatra sy serivisy an'i Junya dia fampaherezana lehibe ho an'ny ekipan'i Yu Junya. Amin'ny andro ho avy, Junya dia hanohy hiezaka ny hanana hatsaram-panahy, hanatsara ny teknolojia fanariana, ary handray anjara amin'ny fampandrosoana matanjaka ny indostrian'ny fanariana mekanika ao Shina!
Amin'ity fampirantiana ity, ny vokatra Junya toy ny faritra vy tsy misy fangarony ary ny akora famoahana famatsiam-bola, izay malaza eny an-tsena, dia nahazo ny loka "Innovative Product Award" voalohany. Misaotra betsaka ny indostria izahay tamin'ny nanamafisany sy nidera ny vokatray, ary ny mpanjifa noho ny fanohanany sy ny fahatokisany anay! Ary ampiasao ity ho famporisihana hanohy hamboly ny indostrian'ny fanariana milina, hampiroborobo bebe kokoa ny casting casting, ary hanome ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany vokatra sy serivisy tsara kokoa!
Fitaovana fanariana famatsiam-bola, Valve indostrialy, Fizarana fanariana fampiasam-bola, Fittings Sodina tsy misy vy, Valve vy vita amin'ny vy tsy miova, Hazo fijaliana 316 Pipe Fitting Cross,